‘मिस्टर भर्जिन’लाई के भन्न भयो गाह्रो ? (टिजर) « Ramailo छ
‘मिस्टर भर्जिन’लाई के भन्न भयो गाह्रो ? (टिजर)
फिल्म ‘मिस्टर भर्जिन’को टिजर सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक टिजरमा फिल्मका मुख्य कलाकार गौरव पहारी, विजय बराल, कमलमणि नेपाल, मरिस्का पोख्रेललाई देख्न सकिन्छ । विशारद बस्नेत निर्देशित मिस्टर भर्जिन तीन युवाको यौन मनोविज्ञान कथा आधारित छ । टिजर हेर्नुस् :
‘मिस्टर भर्जिन’मा महेश दवाडीको कथा, रामेश्वर कार्कीको छायाङ्कन, विक्रम स्वाँर, दीपक याम सिंहको कोरियोग्राफी, सुरज पण्डित, श्रीकृष्ण बम मल्ल, बुलेट फ्लो, आधा सुर, आर जे, मिस्टर प्रिन्सको सङ्गीत र मिलन डी. काप्रीले सम्पादन रहेको छ । फिल्ममा टेक्निकल हेडको रूपमा दशरथ गिरी रहेका छन् ।